အိမျ နံပါတျမြား ရဲ့ အစှမျးသတ်တိမြား – Nyi Ma Lay
အိမျ နံပါတျမြား ရဲ့ အစှမျးသတ်တိမြား
By Nyi Ma LayPosted on October 21, 2021 October 21, 2021
ဆောငျးရာသီ ၏ အေးခမျြးေ သာမနကျ ခငျးမြား၌ကြှနျုပျ တို့ ဆရာတပ ညျ့နှဈဦးရပျကှ ကျအတှငျး ခွခေငျးလကျခငျး သာသညျ့ေ နရာမြားသို့လမျးေ လြှာကျထှကျွ ဖဈကွပါ၏ လမျးလြှောကျထှ ကျရငျးလညျး ပညာရပျဆိုငျရာ အခွခေံဗဟုသုတ မြားဆှေးနှေးဖွဈကွလေ့ ရှိပါ၏
ဆရာတပ ညျ့နှဈဦး အေးမွသောေ ဆာငျးဥတုမနကျ ခငျးမြားအ တှငျးလမျး လြှောကျထှကျရငျး ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ့ ပညာရပျဆိုငျရာ အကွောငျးအရာ မြားအားစာဖ တျသူမြား ဗဟုသု တဖွဈစရေနျ အနညျးငယျစီမြှဝတေငျပွသှားမညျဖွဈပါသညျ
ယခု ပထမဦးစှာ မြှဝမေညျအကွောငျးအ ရာကေ တာ့ အိမျနံပတျ နဲ့ ပတျသတျပွီး ထူးခွားတဲ့အကွောငျးအရာမြားဖွဈပါ၏ ကိုယျ့ရဲ့ အိမျနံပတျက သာမနျနံပတျ တဈခုလို့ထငျရပမေယျ့ တကယျတမျးမှာ ကိုယျ့ဘဝအတှကျ အလှနျအရေးပါတဲ့ အရာတဈခုလညျး ဖွဈပါသညျ
အိမျနံပတျတှေ ဟာကိုယျ့ အတှကျ ထူးခွားတဲ့ဖွဈစဉျတှေေ ပးစှမျးနိုငျသလို ဆိုး ကြိုးတှကေိုလညျးပေးစှ မျးနိုငျတဲ့အရာတှပေါ ။ သငျ့အိမျနံပတျကကော ?
သငျ့ အိမျနံပတျက ဂဏနျး တဈလုံးထဲဆိုရငျတော့ သကျဆိုငျတဲ့ နံပတျကိုဖတျကွညျ့ပါ ။ ဂဏနျး ၂ လုံးဖွဈနရေငျတော့…ဥပမာ ၇၉ ဆိုရငျ ၇+၉=၁၆ ၊ ၁+၆=၇ ၊၇ ကို ဖတျရမှာပဲဖွဈပါတယျ။ ၁၀ ဆိုရငျတော့ ၁ နဲ့ ၀ ပေါငျးစရာ မလိုပါဘူး။
ဒီအိမျမှာေ နထိုငျတဲ့သူတှေ ကတော့ စှနျ့စားရ တာကွိုကျနှဈ သကျပွီးကိုယျ့ကိုယျ ကိုရှတေ့နျးတငျတတျ တဲ့သူတှပေါ ။အခွေ အနတေိုငျးကို လညျးဝရုနျးသု နျးကားဖွဈအောငျလု ပျတတျကွ တဲ့သူတှပေါ။
မိသားစုကို ခဈြခငျတဲ့ သူတှနေတေဲ့အိ မျပါပဲ ။အေးခမျြးမှု နဲ့ ကွငျနာမှုတ ရားတှလှေမျွး ခုံနတေဲ့ အိမျလေးတဈလုံးပါ ။
လှတျလပျစှာေ တှးချေါတတျပွီး ဘဝရဲ့အဓိ ပ်ပါယျတှကေို ရှာဖှနေတေ တျတဲ့သူမြိုးတှပေါ ။တဈခါတဈလမှောတော့ သူတို့အတှကျ မှနျးခကျြနဲ့ နှမျးထှကျမ ကိုကျတာမြိုးရှိ တတျပါတယျ ။
ကြောကျရုပျ တဈခုလို ခိုငျမာတဲ့ သူတှနေေ ထိုငျတဲ့ အိမျတဈလုံးပါ ။ မကောငျးတဲ့ကံကွမ်မာတှသေူတို့ဆီ ဝငျရောကျမ လာနိုငျသလို ပြျောရှငျမှုတှလေညျး ရောကျမလာနိုငျပါဘူး။
အလှနျတကျကွှတဲ့ သူတှနေေ ထိုငျတဲ့အိမျပါ ။အမွဲတမျးအငျအားအပွညျ့နဲ့ ရှေ့ ဆကျပွီး ဘယျအရာမ ဆိုမနားတမျး လုပျဆောငျနေ တဲ့သူေ တှပါ ။ သူတို့ရဲ့အားနညျးခကျြကတော့ အခြိနျခဏ တာပြျောရှငျမှုတှကေိုေ ငှအမြားအပွားသုံွး ပီးရှာဖှတေတျွ ကခွငျးပါပဲ
ဒီအိမျမှာနထေို ငျတဲ့သူတှကေတော့ တိတျဆိတျ စှာနထေိုငျကွလေ့ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့ကိုယျရော အိမျနီးခငျြးတှကေိုပါ ဂရုစိုကျတတျ တဲ့သူတှဖွေဈပွီးတော့ အလှနျအေးဆေးတ ညျငွိမျတဲ့သူတှပေါ ။
ဘဝမှာလမျးေ ပြာကျနပွေီး ရညျရှယျခကျြ တဈခုကို ရှာဖှနေတေဲ့သူေ တှကတော့ ဒီအိမျမှာနထေိုငျကွလရှေိ့ပါတယျ။သူတို့ဟာ အခှငျ့အရေးတ ဈခုရောကျမလာမခငျြး လမျးပြော ကျနတေတျကွတဲ့သူတှပေါ ။
အလုပျကို တနျဖိုးထားတတျတဲ့သူတှဖွေဈပွီး တရားမြှတမှုကို ဦးစားပေးတတျတဲ့သူတှပေါ ။ခေါငျးဆော ငျကောငျးတဈယော ကျရဲ့အိမျတဈ ခုလို့ပွောရမှာဖွဈပွီး အလှနျတာဝနျယူ တတျတဲ့အတှကျ လူတှကွေားမှာအောငျွ မငျကြျောကွားတဲ့သူတှေေ နထိုငျတဲ့အိမျ ပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီအိမျမှာနေ တဲ့သူတှကေေ တာ့ ခေါငျးမာတယျ ။ကိုယျရှေးခယျြလိုကျတဲ့ကိစ်စတဈခုက မအောငျမွငျရငျေ တာ့အတှအေ့ကွုံရတ ယျလို့သဘော ထားပွီး ခေါငျးမာမာနဲ့ ရှဆေ့ကျတဲ့သူတှပေါ ။
အခြိနျအခါကောငျးတ ဈခုကို စောငျ့ဆိုငျးနတေဲ့ သူတှနေထေိုငျ တဲ့အိမျပါ ။ဘဝမှာ ဆိုးရှားတဲ့ အခြိုးအကှတေ့ဈခုကွုံပွီးနောကျ အခြိနျကောငျးတှေေ ရာကျလာအောငျ စောငျ့ဆိုငျးနေ တဲ့သူတှဟော အိမျနံပတျ ၁၀ မှာ စတညျး ခနြလေရှေိ့ကွပါကွောငျး ဆရာသခငျ မြားထံမှ သိမှတျလေ့ လာခဲ့ရမှုအား ပွနျလညျမြှဝလေိုကျရပါသညျ..
ဆရာသခငျမြား၏ ပညာသာဖွဈပါသညျဆရာ ဇနက (ဝိဇ်ဇာဓရဂိုဏျးတျော)
ဆောင်းရာသီ ၏ အေးချမ်းေ သာမနက် ခင်းများ၌ကျွန်ုပ် တို့ ဆရာတပ ည့်နှစ်ဦးရပ်ကွ က်အတွင်း ခြေခင်းလက်ခင်း သာသည့်ေ နရာများသို့လမ်းေ လျှာက်ထွက်ြ ဖစ်ကြပါ၏ လမ်းလျှောက်ထွ က်ရင်းလည်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အခြေခံဗဟုသုတ များဆွေးနွေးဖြစ်ကြလေ့ ရှိပါ၏
ဆရာတပ ည့်နှစ်ဦး အေးမြသောေ ဆာင်းဥတုမနက် ခင်းများအ တွင်းလမ်း လျှောက်ထွက်ရင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ များအားစာဖ တ်သူများ ဗဟုသု တဖြစ်စေရန် အနည်းငယ်စီမျှဝေတင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်
ယခု ပထမဦးစွာ မျှဝေမည်အကြောင်းအ ရာကေ တာ့ အိမ်နံပတ် နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာများဖြစ်ပါ၏ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်နံပတ်က သာမန်နံပတ် တစ်ခုလို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ ကိုယ့်ဘဝအတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့ အရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်
အိမ်နံပတ်တွေ ဟာကိုယ့် အတွက် ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေေ ပးစွမ်းနိုင်သလို ဆိုး ကျိုးတွေကိုလည်းပေးစွ မ်းနိုင်တဲ့အရာတွေပါ ။ သင့်အိမ်နံပတ်ကကော ?
သင့် အိမ်နံပတ်က ဂဏန်း တစ်လုံးထဲဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်တဲ့ နံပတ်ကိုဖတ်ကြည့်ပါ ။ ဂဏန်း ၂ လုံးဖြစ်နေရင်တော့…ဥပမာ ၇၉ ဆိုရင် ၇+၉=၁၆ ၊ ၁+၆=၇ ၊၇ ကို ဖတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၀ ဆိုရင်တော့ ၁ နဲ့ ၀ ပေါင်းစရာ မလိုပါဘူး။
ဒီအိမ်မှာေ နထိုင်တဲ့သူတွေ ကတော့ စွန့်စားရ တာကြိုက်နှစ် သက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ် ကိုရှေ့တန်းတင်တတ် တဲ့သူတွေပါ ။အခြေ အနေတိုင်းကို လည်းဝရုန်းသု န်းကားဖြစ်အောင်လု ပ်တတ်ကြ တဲ့သူတွေပါ။
မိသားစုကို ချစ်ခင်တဲ့ သူတွေနေတဲ့အိ မ်ပါပဲ ။အေးချမ်းမှု နဲ့ ကြင်နာမှုတ ရားတွေလွှမ်ြး ခုံနေတဲ့ အိမ်လေးတစ်လုံးပါ ။
လွတ်လပ်စွာေ တွးခေါ်တတ်ပြီး ဘဝရဲ့အဓိ ပ္ပါယ်တွေကို ရှာဖွေနေတ တ်တဲ့သူမျိုးတွေပါ ။တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ သူတို့အတွက် မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မ ကိုက်တာမျိုးရှိ တတ်ပါတယ် ။
ကျောက်ရုပ် တစ်ခုလို ခိုင်မာတဲ့ သူတွေနေ ထိုင်တဲ့ အိမ်တစ်လုံးပါ ။ မကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာတွေသူတို့ဆီ ဝင်ရောက်မ လာနိုင်သလို ပျော်ရွှင်မှုတွေလည်း ရောက်မလာနိုင်ပါဘူး။
အလွန်တက်ကြွတဲ့ သူတွေနေ ထိုင်တဲ့အိမ်ပါ ။အမြဲတမ်းအင်အားအပြည့်နဲ့ ရှေ့ ဆက်ပြီး ဘယ်အရာမ ဆိုမနားတမ်း လုပ်ဆောင်နေ တဲ့သူေ တွပါ ။ သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ အချိန်ခဏ တာပျော်ရွှင်မှုတွေကိုေ ငွအများအပြားသုံြး ပီးရှာဖွေတတ်ြ ကခြင်းပါပဲ
ဒီအိမ်မှာနေထို င်တဲ့သူတွေကတော့ တိတ်ဆိတ် စွာနေထိုင်ကြလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ရော အိမ်နီးချင်းတွေကိုပါ ဂရုစိုက်တတ် တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ အလွန်အေးဆေးတ ည်ငြိမ်တဲ့သူတွေပါ ။
ဘဝမှာလမ်းေ ပျာက်နေပြီး ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုကို ရှာဖွေနေတဲ့သူေ တွကတော့ ဒီအိမ်မှာနေထိုင်ကြလေ့ရှိပါတယ်။သူတို့ဟာ အခွင့်အရေးတ စ်ခုရောက်မလာမချင်း လမ်းပျော က်နေတတ်ကြတဲ့သူတွေပါ ။
အလုပ်ကို တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး တရားမျှတမှုကို ဦးစားပေးတတ်တဲ့သူတွေပါ ။ခေါင်းဆော င်ကောင်းတစ်ယော က်ရဲ့အိမ်တစ် ခုလို့ပြောရမှာဖြစ်ပြီး အလွန်တာဝန်ယူ တတ်တဲ့အတွက် လူတွေကြားမှာအောင်ြ မင်ကျော်ကြားတဲ့သူတွေေ နထိုင်တဲ့အိမ် ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအိမ်မှာနေ တဲ့သူတွေကေ တာ့ ခေါင်းမာတယ် ။ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုက မအောင်မြင်ရင်ေ တာ့အတွေ့အကြုံရတ ယ်လို့သဘော ထားပြီး ခေါင်းမာမာနဲ့ ရှေ့ဆက်တဲ့သူတွေပါ ။
အချိန်အခါကောင်းတ စ်ခုကို စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ သူတွေနေထိုင် တဲ့အိမ်ပါ ။ဘဝမှာ ဆိုးရွားတဲ့ အချိုးအကွေ့တစ်ခုကြုံပြီးနောက် အချိန်ကောင်းတွေေ ရာက်လာအောင် စောင့်ဆိုင်းနေ တဲ့သူတွေဟာ အိမ်နံပတ် ၁၀ မှာ စတည်း ချနေလေ့ရှိကြပါကြောင်း ဆရာသခင် များထံမှ သိမှတ်လေ့ လာခဲ့ရမှုအား ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါသည်..
ဆရာသခင်များ၏ ပညာသာဖြစ်ပါသည်ဆရာ ဇနက (ဝိဇ္ဇာဓရဂိုဏ်းတော်)
Previous post အရကျ ဆိုတဲ့ အသံကို မကွား မမွငျခငျြအောငျ ဖွဈသှားစမေညျ့ အစှမျးထကျတဲ့ အရကျဖွတျနညျး
Next post ရှေးလူကွီးတှေ ပွောတဲ့ ” ဧညျ့သညျလာရငျ ဆနျ မကုနျစနေဲ့ ” ဆိုတဲ့ စကားရဲ့ ဆိုလိုရငျးအဓိပ်ပါယျ